Boko Haram oo 22 Qof ku Dishay weerar ay ku Qaadday Kaniiisad ku taala Nigeria – Radio Daljir
Luulyo 6, 2015 4:29 b 0
Isniin, Luuliyo 06, 2015 (Daljir) —Kooxda Boko Haram ee ka Dagaallanta Dalka Nigeria ayaa xalay weerar ku qaadday Masjid iyo Makhaayad laga afurayay oo ku taalla magaalada Jos ee bartamaha dalka Nigeria.
Xoogag hubeysan ayaa rasaas oodda uga qaaday Masaajidka ku yaalla magaalada Jos ee dalka Nigeria ayaa lasheegayaa in lagu dilay ugu yaraan 22-qof, iyadoo xilliga la weeraray masjidka ay ku tukanayeen dad fara badan oo muslimiin ah, kadibna waxaa xigay Qarax weyn oo Goobtaasi ka dhacay.
Weerarkan ayaa lala damacsanaa Sheekh Sani Yahaya Jingir oo Imaam ka ah masaajidka la weeraray, Sheekha ayaa horay u cambaareeyey weerrarada Kooxda Boko Haram. Iyadoo xilliga uu Qaraxu dhacayay ayuu wadaadku u khudbeynayay muslimiin badan.
Qaraxa labaad ayaa ka dhacay makhaayad si weyn looga cunteeyo oo ku taalla Jos, xilli halkaasi ay dadka muslimiinta ah ku afurayeen. Iyadoo wararka hordhaca ah ay sheegayan in qaraxaas ay ku dishay 18-qof oo ka mid ahaa dadkii maqaahiada ku jiray.
Tirada dadka ku geeriyooday labada weerar ee ka dhacay magaalada Jos ayaa la sheegay inay gaarayaan 44-qof oo u badan rag, waxaana weerarkan uu ka mid noqonayaa kuwii ugu khasaaraha badnaa ee Boko Haram ay ka geysato dalka Nigeria.
Duullaanka Boko Haram ku Qaadday Magaalada Jos ayaa imaanaya saacado kaddib markii Weerar is-miidaamin ah ay kooxdaas ku qaaday Kaniisad ku taalla Potiskum, halkaasoo ay Axaddii Shalay ahayd ku dileen ugu yaraan shan qof.